Lydia Kuria, Munyori paRuzivo SUCCESS
Lydia mukoti uye anoshanda seProjekti Officer neAmref Health Africa. Parizvino anopa Rutsigiro rweTekinoroji kunzvimbo dzekutanga dzehutano dziri munzvimbo isina kurongwa yeKibera muNairobi. Tsigiro yake yehunyanzvi inovhara amai, achangozvarwa, mwana, uye utano hwevachiri kuyaruka; kudzivirira kutapurirana kweHIV kubva kuna amai kuenda kumwana; mhirizhonga kuvanhukadzi; uye kudzivirira HIV kuvana nevechiri kuyaruka, care, uye kurapwa. Izvi zvisati zvaitika, Lydia akashanda semukoti muMNCH/Maternity nedhipatimendi revarwere vekunze muAmref Kibera Clinic., kwaakashanda semutungamiri weboka renzvimbo. Lydia anofarira kurima nekupa mazano nekudzidziswa kwehunyanzvi hwehupenyu kuvasikana nevakadzi vadiki. Unogona kusvika Lydia pa lydia.kuria@amref.org.
chat_bubble0 Comment kuonekwa14574 Views